Tato ironman, nahazo aingam-panahy avy amin'i Tony Stark | Ny fanaovana tatoazy
Tato ironman, nahazo aingam-panahy avy amin'i Tony Stark
Hatramin'ny taona vitsivitsy lasa izay, a tombokavatsa Azo antoka fa ny mpankafy Iron Man ihany no heken'ny Ironman. Saingy androany, noho ny sarimihetsika an'ny Marvel Marvel, nivadika ny latabatra ary fantatry ny rehetra ny fiadiana volamena sy mena an'ny maherifo.
Ary soa ihany satria Tony dia nanome antsika fotoana sasany mampientanentana indrindra ao amin'ny cine tamin'ny taona lasa. Ity misy fomba hahazoana aingam-panahy amin'ny tatoazy!
1 Stark's charisma, tsy azo resena amin'ny tatoazy
2 Saripika izay tsy misy an'i Rembrandt
3 Vondron-tsarimihetsika Avengers mivondrona!
4 Tsy misy olona mikapoka an'i cuqui
Stark's charisma, tsy azo resena amin'ny tatoazy
Manankarena, miavona, manan-tsaina izaitsizy, manankarena, mahatsikaiky ary… hoy ve isika manankarena? Raha eto ianao dia azonao antoka fa hahafantatra ny toetran'ilay milioney mahery fo indrindra eo amin'ny tontolon'ny tantara an-tsary sy sinema. Fa, Ahoana no fomba ahazoanao an'io tattoo io amin'ny tattoo?
Safidio ny maka tahaka ny fomban'ny tantara an-tsary. Amin'ny vignettes dia afaka manana Ironman mihetsika ianao, fotoana mety indrindra hampisehoana ny lehilahy eo ambanin'ny fiadiana amin'ny alàlan'ny fihetsika, hetsika ...
Saripika izay tsy misy an'i Rembrandt
Na dia mety tsy anao ny mampiseho ny toetoetran'ny maherifonao ankafiziny amin'ny hetsika, fa ny misafidy sary misy andinindininy. Aza mieritreritra fa asa tsotra na dia miafina ao ambany fiadiana aza i Tony: mila mpanakanto ianao izay mahay mamindra ny maha-olona ilay maherifo amin'ny alàlan'ny famirapiratan'ny fiadiany.
Vondron-tsarimihetsika Avengers mivondrona!
Miaraka fa tsy mikoropaka, raha toa ka tsy mahalala anao kely ny tatoazy Ironman dia azonao atao ny misafidy endrika amam-bika izay isehoany miaraka amin'ireo ambiny gang, toa an-dry Thor, Captain America, Black Widow, Black Panther, Hulk, Spider-man .. . Araraoty ny lokon'ny akanjon'izy ireo sy ny toetrany mba hahatratrarana endrika mavitrika sy Avenger zato isan-jato.
Tsy misy olona mikapoka an'i cuqui
Satria andao jerena, Ironman dia ho henjana be, ary i Tony Stark koa, saingy azony ny fontsika kely satria manana izany koa izy. Ka maninona raha mandeha amin'ny famolavolana izay mahatonga azy ho olona tiana?
Nahazo aingam-panahy tamin'ny tatoazy Ironman manaraka ve ianao? Lazao anay izay rehetra ilainao ao amin'ny hevitra!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tattoosin'ny toetra amam-panahy » Tato ironman, nahazo aingam-panahy avy amin'i Tony Stark
Tatoa clover, tatoazy tena marobe sy tsara vintana
Tatoazy cousine, ranomainty mihoatra ny havana